Diclofenac (ဒိုင်ကလိုဖန်းနက်) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Diclofenac (ဒိုင်ကလိုဖန်းနက်)
Diclofenac (ဒိုင်ကလိုဖန်းနက်) ကဘာလဲ။
Generic Name: Diclofenac (ဒိုင်ကလိုဖန်းနက်) Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Diclofenac (ဒိုင်ကလိုဖန်းနက်) ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
NSAID အုပ်စုဝင်ဖြစ်သည့် Diclofenac ကို အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးနှင့် အရောင်ကျဆေး၊ အရိုးအဆစ်ရောင်ရမ်းခြင်းနှင့် ကိုက်ခဲခြင်းအနေနှင့် အသုံးပြုကြသည်။ ထိုရောဂါလက္ခဏာများသက်သာသွားပါက နေ့စဉ်လှုပ်ရှားမှုများကို လည်းပြုလုပ်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
သင်သည် နာတာရှည် အရိုးအဆစ်ရောင်ရမ်းခြင်းကိုကုသတော့မည်ဆိုလျှင် Diclofenac သုံးရန် လိုမလိုကိုသင့်ဆရာဝန်နှင့် သေချာစွာတိုင်ပင်ပါ။
အခြားအသုံးဝင်ပုံများ – သင့်ဆရာဝန်က လိုအပ်၍ညွှန်ကြားလျှင် ဆေးညွှန်းထဲတွင်မပါသော ရောဂါများအတွက်လည်း အသုံးပြုနိင်သည်။
Diclofenac ကို သွားနာခြင်း၊ ကြွက်သားနာခြင်းနှင့် ကလေးမွေးရန်ခွဲစိတ်မှုကြောင့် နာကျင်ခြင်းတို့အတွက်လည်းအသုံးပြုနိုင်သည်။ သို့သော်ချက်ချင်းအနာ သက်သာစေရန်အတွက်မူ အခြားသော အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးအမျိုးအစားများကိုလည်း အသုံးပြုနိုင်သည်။
အသေးစိတ်သိရှိရန် ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ပါ။
Diclofenac (ဒိုင်ကလိုဖန်းနက်) ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်သလဲ
Diclofenac ကို ရေတဖန်ခွက် နှင့် သောက်ရမည်။ ဆေးသောက်ပြီး ၁၀ မိနစ်အထိလဲလျောင်းမနေရ။ အစာ၊ နွားနို့ တို့နှင့် လည်းတွဲသောက်နိုင်သည်။ ဆေးကို ပုံမှန်မသောက်ပါက ဆေးစုပ်ယူမှုနည်းခြင်းနှင့် အနာလျင်မြန်စွာမသက်သာခြင်းတို့ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ဆေးကို မဝါးဘဲအလုံးလိုက်မျိုချပါ။ ၎င်းသည် မလိုအပ်သည့် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကို လျော့ကျစေပါသည်။
ဆေးပမာဏမှာ သင့်ရောဂါ အခြေအနေအပေါ်မူတည်ပြီး ကွဲပြားမှုရှိသည်။ သင်သောက်နေသော ဆေးများ (ဆေးညွှန်းပါ/မပါသောဆေးများ၊တိုင်းရင်းဆေးများ)ကိုစာရင်းလုပ်ပြီး ဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်ပါ။ ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်၏ခွင့်ပြုချက်မပါဘဲ ဆေးများကိုမိမိသဘောနှင့်အတိုးအလျှော့ပြုခြင်း၊ဆေးဖြတ်လိုက်ခြင်းတို့ မပြုလုပ်ရပါ။
အစာအိမ်သွေးယိုခြင်းကဲ့သို့သော ဆိုးကျိုးများမဖြစ်စေရန် ဆေးကို ဖြစ်နိုင်လျှင် လိုအပ်သလောက်ပဲသောက်သင့်သည်။ နာတာရှည် အဆစ်ရောင်ခြင်းကဲ့သို့သော ရောဂါများတွင်မူ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားသည့် အတိုင်းသောက်သင့်သည်။ ထိုရောဂါများတွင်မူ အနည်းဆုံး ၂ ပတ်ခန့်သောက်ရသည်ကိုတွေ့ရသည်။
အကယ်၍သင်သည် နာကျင်ကိုက်ခဲမှုများကို သက်သာရန်ဆေးကိုလိုအပ်သလိုသောက်မည်ဆိုပါက စတင်နာသည့်အချိန်တွင်သောက်ခြင်းသည် အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါသည်။ မသက်သာဘဲ ပိုနာလာပါက ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်သင့်ပါသည်။
အခြားမရှင်းလင်းသည်များရှိလျှင် ဆရာဝန်သို့မဟုတ် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူများနှင့် တိုင်ပင်သင့်ပါသည်။
Diclofenac (ဒိုင်ကလိုဖန်းနက်) ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းရမလဲ
ဆေးအများစုမှာ အခန်းအပူချိန်တွင် သိုလှောင်ထားနိုင်ပါတယ်။ Diclofenac ကို တိုက်ရိုက်နေရောင်ခြည်မထိုးအောင်နဲ့ စိုစွတ်မှုမရှိအောင်ထားတာက အကောင်းဆုံးသိုလှောင်သိမ်းဆည်းတဲ့နည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်တာနဲ့ ဆေးအနေအထားပျက်ယွင်းမှုတွေမဖြစ်အောင်လို့ Diclofenac ကို ရေချိုးခန်းထဲမှာသိမ်းဆည်းတာနဲ့ ရေခဲအောင် သိမ်းဆည်းတာတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။ Diclofenac ဆေးအမျိုးအစားနဲ့၊ ဆေးထုတ်လုပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီကွဲပြားမှုပေါ်မူတည်ပြီး သိမ်းဆည်းတဲ့ပုံစံကွဲပြားခြားနားမှုရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒီအတွက် ဆေးဘူးအခွံမှာပါတဲ့ သိုလှောင်သိမ်းဆည်းမှုညွှန်ကြားချက်ကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးတာမျိုး ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကို မေးမြန်းတာမျိုးကိုအမြဲလုပ်ပါ။ လုံခြုံစိတ်ချရဖို့အတွက် ဆေးဝါးတွေအကုန်လုံးကို ကလေးတွေ၊ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်တွေနဲ့ ဝေးရာမှာထားပါ။
Diclofenac ကို အိမ်သာထဲကိုပစ်ချတာနဲ့ ရေထွက်ပေါက်တွေထဲကနေ ဆေးချတာမျိုးကို မလုပ်သင့်ပါဘူး။ ဆေးဝါးတွေကိုမလိုအပ်တော့တဲ့အခါ ဒါမှမဟုတ် သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားတဲ့အခါတွေမှာ စနစ်တကျစွန့်ပစ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဆေးဝါးများကို စနစ်တကျဘယ်လိုစွန့်ပစ်ရမယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ သင့်ရဲ့ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နဲ့တိုင်ပင်ပါ။
Diclofenac ကိုရေခဲသေတ္တာထဲတွင် သိမ်းဆည်းခြင်းက အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်နိုင်တဲ့အတွက် ရေခဲအောင်မလုပ်ရပါ။
Diclofenac (ဒိုင်ကလိုဖန်းနက်) အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
• မိမိတွင်Diclofenac နှင့် Diclofenac ပါဝင်သော Solaraze ၊Pennsaid၊ Arthrotec)၊ aspirin ၊ ibuprofen (Advil၊ Motrin) ၊ naproxen (Aleve၊ Naprosyn)တို့နှင့်ဓါတ်မတည့်ခြင်းများရှိလျှင်နွားနို့ အမဲသားနှင့် ကျောက်ကျောတို့နှင့်ဓါတ်မတည့်လျှင့်
• ဆေးညွှန်းပါ/မပါသောဆေးများ၊တိုင်းရင်းဆေးများသောက်နေလျှင် ဆရာဝန်ကိုပြောပါ။ အောက်ပါဆေးများသည် Diclofenac နှင့် ပြင်းထန်စွာဓါတ်ပြုနိုင်သောကြောင့်အရေးကြီးပါသည်။
acetaminophen (Tylenol)၊ angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitors ဥပမာ benazepril (Lotensin)၊ captopril (Capozide)၊ enalapril (Vasotec )၊ fosinopril (Monopril)၊ lisinopril (Prinivil၊ Zestril)၊ moexipril (Univasc)၊perindopril (Aceon)၊ quinapril (Accupril)၊ ramipril (Altace)၊trandolapril (Mavik)၊ cyclosporine (Neoral၊ Sandimmune)၊ digoxin (Lanoxin)၊ ဆီးဆေး၊ အင်ဆူလင် ၊ ဆီးချိုကျဆေးသောက်ဆေးများ၊ လစ်သီယန် (Eskalith၊ Lithobid)၊ အတက်ကျဆေး ၊ methotrexate (Rheumatrex)၊ rifampin (Rifadin၊ Rimactane၊ Rifamate၊ Rifater) ၊ voriconazole (Vfend).
အထက်ပါစာရင်းတွင်မပါရှိသော အခြားဆေးများသောက်နေရပါက လည်း ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ပါ။ သင့် ဆရာဝန်က ဆေးပမာဏ။ အမျိုးအစားပြောင်းပေးခြင်း နှင့် ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော ဆိုးကျိုးများကို စောင့်ကြည့်ပေးလိမ့်မည်။
• Diclofenac နှင့် မတည့်သော သတိပေးချက်များကိုလေ့လာပါ။ ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါ ၊ နှာစေးခြင်း နှင့် နှာခေါင်းထဲတွင် အလုံးအကျိတ်များဖြစ်နေလျှင်၊ Porphyria မွေးရာပါသွေးရောဂါရှိလျှင် ၊ နှလုံး၏စွမ်းဆောင်ရည်ကျဆင်းမှုကြောင့် ခြေထောက်များရောင်ရမ်းခြင်းတို့ဖြစ်လျှင်၊ အသည်းနှင့် ကျောက်ကပ်ရောဂါများဖြစ်လျှင်
• မိမိတွင်ကိုယ်ဝန်ရှိလျှင် သို့မဟုတ် နို့တိုက်သောမိခင်ဖြစ်လျှင်၊ဆေးသောက်နေရင်း ကိုယ်ဝန်ရှိလာလျှင် တိုင်ပင်ပါ။
• သွားအပါအဝင် အခြားသော ခွဲစိတ်မှုများကြောင့် Diilofenac သောက်နေရလျှင်
• Phenylketouria ဟုခေါ်သော အမိုင်နိုအက်ဆစ်ဓါတ်လျော့နည်းသောရောဂါရှိလျှင် (ဉာဏ်ရည်ချို့တည့်ခြင်းမဖြစ်စေရန် အထူးသတ်မှတ်ထားသော အစားအစာများစားသုံးရမည်။)
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Diclofenac (ဒိုင်ကလိုဖန်းနက်) ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
ယခုဆေးဝါးကို ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန်နှင့် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်တွင် အသုံးပြုလျှင် ဆိုးကျိုးများရှိမရှိကို ဆုံးဖြတ်နိုင်ရန်အတွက် လုံလောက်သော လေ့လာစမ်းသပ်ချက်များမရှိပါ။ ဆေးမသောက်သုံးမီတွင် ဖြစ်နိုင်ချေကောင်းကျိုးများနှင့် ဆိုးကျိုးများအားလုံးကို ချိန်ဆနိုင်ရန်အတွက် သင့်ရဲ့ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ပါ။ ယခုဆေးဝါးသည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု အစားအသောက်နဲ့ ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးအဖွဲ့၏ သတ်မှတ်ချက်အရ ကိုယ်ဝန်ဆောင်များတွင် ပထမ ခြောက်လတွင် ထိခိုက်နိုင်ချေအဆင့် C၊ နောက်ဆုံးသုံးလတွင် ထိခိုက်နိုင်ချေအဆင့် D ရှိသည်ဟု သတ်မှတ်ထားသည်။
Diclofenac (ဒိုင်ကလိုဖန်းနက်) ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
ဆေး၏ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများတွေ့ရလေ့မရှိပါ။ ဆိုးကျိုးလက္ခဏာများပေါ်ပေါက်ပါက ဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်ရပါမည်။ ဆေးကိုချက်ချင်းရပ်ရပါမည်။
• ရင်ဘတ်အောင့်ခြင်း၊ အသက်၇ှုမဝခြင်း နှင့် စကားပြောလေးလာခြင်း၊ အမြင်မကြည်လင်ခြင်း
• ခြေထောက်များ ဖောရောင်လာခြင်း
• ဆီးနောက်ခြင်း နှင့် ဆီးတွင်သွေးပါခြင်း
• ဗိုက်နာခြင်း၊ အစားအသောက်ပျက်ခြင်း ဆီးအရောင်ရင့်ခြင်းနှင့် ဝမ်းအရောင်ဖျော့ခြင်း
• သွေးခြေဥခြင်းနှင့် ခြေလက် ကြွက်သားများနာကျင်ကိုက်ခဲခြင်း
• လည်ပင်းကြောများတောင့်တင်းခြင်း၊ ခန္ဓါကိုယ်တွင် အနီစက်ထွက်ခြင်း
• ဖျားခြင်း ၊ လည်ချောင်းနာခြင်းနှင့် မျက်နှာနှင့် လည်ပင်းတို့ရောင်လာခြင်း၊ မျက်လုံးနာခြင်း နှင့် အရေပြားများနာကျင်ခြင်း၊ မျက်နှာနှင့် ကိုယ်အပေါ်ပိုင်းတွင် အနီ၊ ခရမ်းရောင်အဖုများထွက်ခြင်း
• ရင်ပူခြင်း၊ ဗိုက်အောင့်ခြင်း၊ဝမ်းပျက်၊ ဝမ်းချုပ်၊ ဗိုက်ကယ်ခြင်း
• ခေါင်းမူး ခေါင်းကိုက်ခြင်း
• အရေပြားယားယံခြင်းနှင့် အနီစက်များထွက်ခြင်း
• နားအူခြင်း တို့ဖြစ်သည်။
ထိုသို့သောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများသည်လူတိုင်းတွင်မတွေ့ရတတ်ပါ။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးလက္ခဏာများပေါ်ပေါက်ခဲ့လျှင် ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ပါ။
ဘယ်ဆေးတွေက Diclofenac (ဒိုင်ကလိုဖန်းနက်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Diclofenacသည် မိမိယခုလက်ရှိသောက်သုံးနေသောဆေးဝါးများ၏ အာနိသင်များပြောင်းလဲသွားနိုင်ပါသည်။ သင်သောက်နေသော ဆေးများ (ဆေးညွှန်းပါ/မပါသောဆေးများ၊တိုင်းရင်းဆေးများ)ကိုစာရင်းလုပ်ပြီး ဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်ပါ။ ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်၏ခွင့်ပြုချက်မပါဘဲ ဆေးများကိုမိမိသဘောနှင့်အတိုးအလျှော့ပြုခြင်း၊ဆေးဖြတ်လိုက်ခြင်းတို့ မပြုလုပ်ရပါ။
အောက်ပါဆေးများသည် Diclofenac နှင့်မတည့်သောဆေးများဖြစ်သည့် အတွက် ထိုဆေးများသောက်နေပါက သင့်ဆရာဝန်သည် ချိန်ဆပြီးဆေးပေးခြင်း ဆေးပြောင်းခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်ပေလိမ့်မည်။
ပုံမှန်အားဖြင့် Diclofenac သောက်နေသူများတွင် Ketorolac မပေးပါ။ သို့သော် ပေးရန်လိုအပ်ပါက သင့်ဆရာဝန်သည် ချိန်ဆပြီးဆေးပေးခြင်း ဆေးပြောင်းခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်ပေလိမ့်မည်။
• Abciximab, Anagrelide, Apixaban, Ardeparin, Argatroban, Beta Glucan, Bivalirudin, Ceritinib, Certoparin, Cilostazol, Citalopram, Clopidogrel, Clovoxamine, Cyclosporine, DabigatranEtexilate, Dabrafenib, Dalteparin, Danaparoid, Deferiprone, Desirudin, Dipyridamole, Duloxetine, Enoxaparin, Eptifibatide, Erlotinib, Escitalopram, Femoxetine, Feverfew, Flesinoxan, Fluoxetine, Fluvoxamine, Fondaparinux, Ginkgo, Gossypol, Heparin, Lepirudin, Levomilnacipran, Meadowsweet, Methotrexate, Milnacipran, Nadroparin, Nefazodone, Nitisinone, Parnaparin, Paroxetine, Pemetrexed, PentosanPolysulfate Sodium, Pentoxifylline, Pralatrexate, Prasugrel, Protein C, Reviparin, Rivaroxaban, Sertraline, Sibutramine, Tacrolimus, Ticlopidine, Tinzaparin, Tirofiban, Venlafaxine, Vilazodone, Vortioxetine, Zimeldine.
• Acebutolol, Acetohexamide, Alacepril, Alprenolol, Amiloride, Amlodipine, Arotinolol, Atenolol, AzilsartanMedoxomil, Azosemide, Befunolol, Bemetizide, Benazepril, Bendroflumethiazide, Benzthiazide, Bepridil, Betaxolol, Bevantolol, Bisoprolol, Bopindolol, Bucindolol, Bumetanide, Bupranolol, Buthiazide, Candesartan Cilexetil, Canrenoate, Captopril, Carteolol, Carvedilol, Celiprolol, Chlorothiazide, Chlorpropamide, Chlorthalidone, Cholestyramine, Cilazapril, Ciprofloxacin, Clopamide, Colestipol, Cyclopenthiazide, Delapril, Desvenlafaxine, Dilevalol, Diltiazem, Enalaprilat, Enalapril Maleate, Eprosartan, smolol, Ethacrynic Acid, Felodipine, Fluconazole, Flunarizine, Fosinopril, Furosemide, Gallopamil, Gliclazide, Glimepiride, Glipizide, Gliquidone, Glyburide, Hydrochlorothiazide, Hydroflumethiazide, Imidapril, Indapamide, Irbesartan, Isradipine, Labetalol, Lacidipine, Landiolol, Levobunolol, Lidoflazine, Lisinopril, Lithium, Losartan, Manidipine, Mepindolol, Methyclothiazide, Metipranolol, Metolazone, Metoprolol, Moexipril, Nadolol, Nebivolol, Nicardipine, Nifedipine, Nilvadipine, Nimodipine, Nipradilol, Nisoldipine, Nitrendipine, lmesartanMedoxomil, Oxprenolol, Penbutolol, Pentopril, Perindopril, Pindolol, Piretanide, Polythiazide, Pranidipine, Propranolol, Quinapril, Ramipril, Sotalol, Spirapril, Spironolactone, Talinolol, Tasosartan, Telmisartan, Temocapril, Tertatolol, Timolol, Tolazamide, Tolbutamide, Torsemide, Trandolapril, Triamterene, Trichlormethiazide, Valsartan, Verapamil, Xipamide, Zofenopril.
• အထက်ပါဆေးများသည် Diclofenac ၏ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကို ပိုဆိုးနိုင်ချေများသော်လည်း အချို့နေရာများတွင် ဆေး၂ မျိုးတွဲပေးမှ အာနိသင်ရှိစေတတ်ပါသည်။ ထိုသို့လိုအပ်လျှင် သင့် ဆရာဝန်က ဆေးပမာဏနှင့်ဆေးသောက်ချိန်ကို ချိန်ဆပေးလိမ့်မည်။
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Diclofenac (ဒိုင်ကလိုဖန်းနက်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
Diclofenacက အစားအသောက် ဒါမှမဟုတ် အရက်သေစာနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အသည်းကိုပို၍အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေပါသည်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေမဖြစ်လာအောင်လို့ အစားအသောက်၊ အရက်သေစာတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်ချေရှိမရှိကို မေးမြန်းတိုင်ပင်ပါ။
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Diclofenac (ဒိုင်ကလိုဖန်းနက်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Diclofenacဟာ သင့်ရဲ့ နဂိုကျန်းမာရေးအခြေအနေများနဲ့ သက်ရောက်ဓါတ်ပြုမှုတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေကို ပိုဆိုးသွားစေတာ ဒါမှမဟုတ် ဆေးသက်ရောက်မှုပုံစံပြောင်းလဲသွားတာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေအကုန်လုံးကို သင့်ရဲ့ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကို အသိပေးဖို့ အရေးကြီပါတယ်။ အောက်ပါရောဂါများရှိပါက ဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်ရန်အရေးကြီးသည်။
• ခြေ လက်တို့ဖောရောင်ခြင်း
• Porphyria မွေးရာပါ သွေးရောဂါတမျိုး
• အစာအိမ်သွေးကြောပေါက်ခြင်း နှင့် အနာဖြစ်ခြင်း
• Aspirin နှင့်မတည့်သော ပန်းနာရင်ကျပ်ဖြစ်ခြင်း
• နှလုံးခွဲစိတ်ဖူးခြင်း (CABG) (မခွဲမီနှင့်ခွဲပြီးတွင်မသုံးသင့်)
• အသည်းရောဂါ (သတိပေးချက်များကို လိုက်နာ၍သုံးသင့်)
• Phenylketouria ဟုခေါ်သော အမိုင်နိုအက်ဆစ်ဓါတ်လျော့နည်းသောရောဂါရှိလျှင် Phenylalanine အမှုန့်သည် ထိုရောဂါပိုဆိုးစေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Diclofenac (ဒိုင်ကလိုဖန်းနက်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
• Osteoarthritis (အဆစ်အမြစ်ရောင်ရောဂါ)
သောက်ဆေး 50mg တနေ့ ၂-၃ကြိမ် သို့ သောက်ဆေး 75mg တနေ့ နှစ်ကြိမ်(တနေ့လျှင် 150 mg ထက်မပိုရ။)
Diclofenac (ရေရှည်အာနိသင်ပေးသော extended release အမျိုးအစား) သောက်ဆေး ၁၀၀mg တနေ့ တစ်ကြိမ်
သောက်ဆေး 25mg တနေ့ ၄ကြိမ် နှင့် အိပ်ခါနီးလိုအပ်လျှင် 25 mg ထပ်သောက်နိင်သည်။
သောက်ဆေး 50mg တနေ့ ၂-၃ကြိမ်
အချို့တွင် 100 mg Diclofenac potassium သောက်ပြီး Diclofenac 50mg ထပ်သောက်သည်။(ပထမနေ့ပြီး နောက်ပိုင်းနေ့များတွင် တနေ့လျှင် 150 mg ထက်မပိုရ။)
Diclofenacpotassiumပါဝင်သော ဆေးရည်တောင့်များသည်အနာမပြင်းထန်သေးသူများအတွက် သောက်နိုင်သည်ဟုအစားအသောက်နှင့် ဆေးဝါးဌာနမှပြောထားသည်။ 25mg တနေ့ ၄ကြိမ်သောက်နိုင်သည်။
အပျော့စား မှ အလယ်အလတ်ကိုက်ခဲမှုများအတွက် လူကြီးတွင် Zorvolex (R) (အခြား Diclofenac များတွင် ဆားပါသည် ဥပမာ-Diclofenac potassium၊ Diclofenac sodium။ Zorvolex (R) ဖော်မြူလာတွင် free acid သာပါသည်။) ။ ။ လူကြီး အတွက် ပမာဏမှာ 18-35 mg တနေ့ ၃ကြိမ်သောက်နိုင်သည်။ အစာနှင့်သောက်လျှင် ဆေးအာနိသင်လျော့နိုင်သောကြောင့် အစာမရှိချိန်သောက်လျှင်ပိုကောင်းသည်။
သောက်ဆေး 50mg တနေ့ ၃ကြိမ်(တနေ့လျှင် 150 mg ထက်မပိုရ။)
အချို့တွင် 100 mg Diclofenac potassium သောက်ပြီး Diclofenac 50mg ထပ်သောက်သည။်(တနေ့လျှင် 150 mg ထက်မပိုရ။)
အပျော့စားမှ အလယ်အလတ် နာကျင်မှုများအတွက် လူကြီးသောက်ရန်ပမာဏ Zorvolex (R) ကို 18-35 mg တနေ့ ၃ကြိမ်သောက်နိုင်သည်။
Zorvolex (R) သည်အစာနှင့်သောက်လျှင် ဆေးအာနိသင်လျော့နိုင်သောကြောင့် အစာမရှိချိန်သောက်လျှင်ပိုကောင်းသည်။
• လေးဖက်နာ အဆစ်ရောင်ရောဂါ
သောက်ဆေး 50mg တနေ့ ၃-၄ ကြိမ် သို့ သောက်ဆေး 75mg တနေ့ ၂ကြိမ်
Diclofenac (extended release) သောက်ဆေး ၁၀၀mg တနေ့ ၁ကြိမ်
(တနေ့လျှင် 225mg ထက်မပိုရ။)
ရှေ့ပြေးလက္ခဏာမရှိသော ခေါင်းတစ်ခြမ်းကိုက်ရောဂါကို သက်သာရန် 50 mg Diclofenac potassium ကို ရေ 60 ml နှင့်ဖျော်သောက်ပါ။
ကလေးတွေအတွက် Diclofenac (ဒိုင်ကလိုဖန်းနက်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
ကလေးငယ်များအတွက် ထောက်ခံထားသော ပမာဏကို ဖော်ပြထားခြင်းမျိုးမရှိပါ။ ကလေးအတွက် ဘေးမကင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ သင့်ကလေးအတွက် စိတ်ချရရန်သင့်ရဲ့ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နှင့် တိုင်ပင်သင့်ပါတယ်။
Diclofenac (ဒိုင်ကလိုဖန်းနက်) ကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ
• ၁၀၀ မီလီဂရမ်ဆေးပြား (ရေရှည်အာနိသင်ထုတ်ပေးသော extended release အမျိုးအစား)
• ၅၀ မီလီဂရမ်၊ ၁၀၀ မီလီဂရမ် စအိုထဲထည့်သော ဂြိုလ်တုတောင့်
အရေးပေါ်အခြေအနေသို့မဟုတ် ဆေးပမာဏလွန်သွားတဲ့အခြေအနေတွေမှာ အောက်ပါ လက္ခဏာများခံစားရနိုင်ပါသည်။
• သွေးဝမ်း၊ ကတ္တရာစေးရောင် ဝမ်းမဲမဲသွားခြင်း
• သွေး၊ ကော်ဖီနှစ်ရောင်အန်ခြင်း
• အသက်ရှုမြန်ခြင်း၊ ပုံမမှန်ခြင်း
Diclofenac ကို သောက်သုံးဖို့ လွတ်သွားခဲ့ပါက (မေ့ခဲ့ပါက) သတိရတဲ့အချိန်မှာ အမြန်ဆုံးသောက်သုံးပါ။ သို့သော်လည်း နောက်တစ်ကြိမ်သောက်သုံးရမယ့်အချိန်နဲ့ နီးကပ်နေပြီဆိုရင်တော့ လွတ်သွားတဲ့အကြိမ်ကို ကျော်ပြီး ပုံမှန်အချိန်မှာပဲ သောက်လိုက်ပါ။ ဆေးပမာဏကို နှစ်ဆတိုးသောက်တာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့။